पतिले उच्च शिक्षा दिलाएर पत्नीलाई राजदूतको ओहोदासम्म पुऱ्याएपछि यिनले पति छोडिन …. - Jerung Films
पतिले उच्च शिक्षा दिलाएर पत्नीलाई राजदूतको ओहोदासम्म पुऱ्याएपछि यिनले पति छोडिन ….
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 16 Aug 2018
जेरुङ फिल्मस सम्वाददाता काठमाडौं । पतिले उच्च शिक्षा दिलाएर पत्नीलाई राजदूतको ओहोदासम्म पुऱ्याउन सहयोग गर्छन् । हाइट बढेपछि पत्नीले पतिलाई सडकको बास गराउँछिन् । त्यस्ता पत्नीलाई के भन्ने ?
खेतीपाती गर्नका निम्ति जग्गाजमिन पनि छैन । जागिर खानका लागि उमेर र अन्य केही काम गर्नका निम्ति जाँगर पनि छैन । यसरी रित्याइएका प्रदीपले बाँकी जिन्दगी कसरी गुजार्ने हुन्, चिन्ताको विषय बनेको छ ।स्रोत: रिपब्लिक दैनिक